Ninkii Buuraha fuuli jiray ee nasiibka lahaa, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Ninkii Buuraha fuuli jiray ee nasiibka lahaa,
Nin sanado ka hor ku turunturooday sanduuq ay ku jiraan dhagxaan qaali ah oo muddo tobanaan sano ah dul saarnaa buurta Mont Blanc ee dalka Faransiiska ayaa hadda la guddoonsiiyay kala bar dhagxaantaasi qaaliga ah.
Ninkaasi oo aan magaciisa la shaacin oo ka mid ah ragga buuraha fuula ayaa dhagxaantaasi helay qaaliga ah sanadkii 2013.
Waxaa la rumeysan yahay in sanduuqaasi uu lahaa qof la socday diyaarad laga leeyahay dalka Hindiya oo burburtay muddo haatan laga joogo nus qarni.
Ninkaasi ayaa xilligaasi lagu ammaanay in sanduuqaasi uu ku wareejiyay booliiska, sida uu dhigayo sharciga dalkaasi Faransiiska.
Balse hadda waxa lagu abaalmariyay kala bar dhagxaantii qaaliga ahayd ee ku jirtay sanduuqaasi oo boqollaal dhagax ah, waxaana barkii qale qaatay maamulka deegaanka Chamonix, kaddib markii dalka India laga waayay qoyska milkiilihii lahaa sanduuqaasi.
Dhagxaantaasi ayaa hadda loo kala qaybiyay laba meelood oo isla’eg oo midkiiba lagu qiyaasay ku dhawaad 200,000 oo doolar, sida uu sheegay duqa magaalada Chamonix, Eric Fournier.
Eric Fournier ayaa ninkaasi ku ammaanay “daacadnimadiisa” maadaama uu u sanduuqaasi ku wareegiyay booliiska.
Laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee dalka ee Air India ah ayaa haatan ka hor ku dul burburtay buurta Mont Blanc, waxaana diyaaraddii ugu horreysay ay halkaasi ku burburtay 1950-kii, halkaas oo ay ku dhinteen 48 qof. Sidoo kale sanadkii 1966-dii ayaa diyaarad labaad oo ay maamulaysay shirkaddaasi isla markaana ay saarnaayeen 117 qof ayaa waxay ku dhacay buurtaasi.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa rumeysan in dhagxaantaasi qaaliga ah ay u badan tahay in ay ka yimaadeen diyaaradii 1966-kii, taasi oo markii ay burbureysay ka soo duushay magaalada Mumbai kuna socotay New York.
Haraaga meydad iyo sidoo kale boorsooyinkii dadkii saarnaa diyaaradahaasi ayaa horey looga helay buurta dusheeda.
Sanadkii 2012, waxaa halkaasi laga helay shandad ay ku jirtay waraaq diblumaasiyadeed oo ka timid dalka India ayaa laga helay buurtaasi dusheeda. Shandaddaasi waxaa kale oo ku jiray joornaallo iyo waraaq la qoray sanadkii 1966.
Homi J Bhabha ahaa khabiir dhanka farsamada isla markaana loo yaqiinay “aabaha” barnaamijka Niyuukleerka dalka India ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaraddaasi dhacday 1966-kii.
Previous articleLix dabeecadood oo ay ka siman yihiin hoggaamiyeyaasha wanaagsan
Next articleF.C.Waraabe oo soo jeediyey in la xidhxidho Salaadiinta Qabaa’ilka ee Burco iyo Sheekh